2021 Ugari hweGrenada
Inozivikanwa se "Spice Island", Grenada inounza kwauri kutarisisa kwakanaka, kunokatyamadza embankings, marefu nemakomo. Aya runako anongova chikamu chenzvimbo zhinji dzinonyengera, uye pane mukana wakakura wekusarega kushanyira zviwi zvitatu zvakanaka kwazvo. Pakati pezvakanaka uye zvikonzero zvekukwezva vatengesi kuGrenada, kune zvakare mitambo yepasi pemvura, kufamba nechikepe, maresitorendi echicc uye mitsara inonakidza yemahombekombe.
kukurumidza kunyoreswa, isingasviki mwedzi mina;
kuiswa kwevana vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu;
kuiswa kwevabereki vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu;
hapana zvinodiwa zvekugara zvakananga;
hapana chikonzero chekuvapo kwako muGrenada kuendesa kunyorera.
hapana chinodikanwa chebvunzurudzo, dzidzo, ruzivo rwe manejimendi;
kushaya vhiza kana uchipinda munharaunda yenyika dzinopfuura zana nemakumi mana, kusanganisira nzvimbo yeSchengen;
zvinoenderana nechibvumirano chakasainwa neGrenada neUnited States, ugari hweGrenada hunopa mukana wekuita zviitiko zvevashandi, kusanganisira bhizinesi, pamwe nekugara muUnited States;
kuregererwa kwemutero wepasi rose;
hapana chinodikanwa chekupasa bvunzo yehunyanzvi hwemutauro;
kunyoreswa kwepasipoti yepamutemo yeGrenada mukati memwedzi mina.
Maitiro ekuwana ugari hweGrenada:
Nekudyara muzvivakwa zvinotenderwa.
Saizi yemari inofanirwa kuve inosvika madhora mazana matatu nemazana mashanu ezviuru, mari yacho inofanirwa kunge iri yeavo vanonyorera kwemakore anosvika mana. Kune mumwe nemumwe munhu anotevera ari mukutarisira kweiye anenge achitsvaga, huwandu hwedzimwe mari ndeye $ 350 zviuru.
2. Mari isingadzoreke
US $ 150 - kune iye mukuru anonyorera;
US $ 200 - kune iye mukuru anonyorera + vanhu vaviri vaari kuchengeta
Mari dzekuongorora kubatanidzwa mukupara mhosva
US $ 5 - kune mukuru anonyorera, vanovimba pamusoro pemakore gumi nemasere ekuberekwa
US $ 2 - Vana vane makore gumi nemaviri kusvika pa000
US $ 3 - kune mukuru anonyorera, vanovimba kupfuura makore gumi nemasere;
US $ 2 - Vana vari pasi pemakore gumi nemasere.
Ugari hweGrenada RUS
Ugari hweGrenada ENG